MGBE IMELITE NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - N'IHI BEGINNERS - 2019
Mgbe imelite ndị ọkwọ ụgbọala
Mgbe ị na-aza nsogbu kọmputa na "geek" ma ọ bụ na-agụ ntụpọ haatic, ụfọdụ n'ime ndụmọdụ ndị a ga-akwụ ụgwọ bụ imelite onye ọkwọ ụgbọala ahụ. Ka anyị hụ ihe nke a pụtara na ma ọ dị mkpa na ị ghaghị ime ya.
Ndị ọkwọ ụgbọala? Kedu ihe ọkwọ ụgbọ ala?
N'okwu dị mfe, ndị ọkwọ ụgbọala bụ mmemme ndị na-enye ohere ka usoro Windows na ngwa dị iche iche na-arụ ọrụ na ngwaike kọmputa. Site n'onwe ya, Windows "amaghị" otu esi eji ọrụ niile nke kaadị vidiyo gị na maka nke a ọ chọrọ ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị. Nakwa maka mmemme ndị ọzọ, a na-enye mmelite ndị ọkwọ ụgbọala na-edozi njehie ochie na imejuputa ọrụ ọhụrụ.
Ọchịchị isi ebe a, ma eleghị anya, ga - - agaghị arụkwa ọrụ. Ọnụ ọzọ abụghị iji wụnye ihe omume dịgasị iche iche na-eme ka ndị ọkwọ ụgbọala na-akpaghị aka maka ngwaike gị niile: nke a nwere ike ịkpata nsogbu karịa ezigbo.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla na kọmputa, ma, o doro anya, ọ bụ ọrụ nke akụrụngwa ya kpatara - ebe a ọ bara uru iche echiche banyere imelite ndị ọkwọ ụgbọala ahụ. O yikarịrị ka, dịka ọmụmaatụ, egwuregwu ọhụrụ na-akụ na kọmpụta gị na ozi na-egosi na ịchọrọ na ihe na-ezighị ezi na kaadị vidiyo, ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ site na ebe nrụọrụ weebụ nke onye ọrụ ahụ nwere ike idozi nsogbu a. Okwughị na ichere ka kọmputa rụọ ọrụ mgbe ị na-emelite ndị ọkwọ ụgbọala na egwuregwu ga-akwụsị ịkwụsịlata (o yikarịrị ka nke a ga-eme ma ọ bụrụ na ị wụnye Windows na kọmputa ị nwere ndị ọkwọ ụgbọala WDDM maka kaadị vidiyo arụnyere, ya bụ. nke sistemụ arụnyere na ya, ọ bụghị ndị ndị na-emepụta vidiyo ahụ mepụtara). Ya mere, ọ bụrụ na kọmputa ahụ arụ ọrụ dị ka ọ kwesịrị, na-eche n'eziokwu na "ọ ga-aba uru imelite ndị ọkwọ ụgbọala" adịghị mkpa - nke a nwere ike ghara iji ya mee ihe.
Kedu ndị ọkwọ ụgbọala chọrọ ka emelite?
Mgbe ịzụtara kọmputa ọhụrụ n'enweghị usoro sistemụ maọbụ rụọ ntinye dị ọcha nke Windows na kọmputa ochie, ọ dị mma iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala ziri ezi. Isi ihe abụghị ka ịnwe ndị ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ, mana ka ha dozie ha maka ngwaike gị. Dịka ọmụmaatụ, ozugbo ị wụnye Windows, ị ga-enwe ike ịnwe nkwụnye Wi-Fi na-arụ na laptọọpụ, ụfọdụ na-adịghị egwu egwu, dị ka Tanki Online, ga-amalite. Nke a nwere ike ime ka ị jide n'aka na ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị vidiyo na eriri na-enweghị ọkụ dị mma. Otú ọ dị, nke a abụghị ụdị, dịka enwere ike ịhụ mgbe njehie na-eme n'oge mbido egwuregwu ndị ọzọ ma ọ bụ mgbe ị na-agbalị ịbanye na isi ihe ntanetị dị iche iche.
Ya mere, ndị ọkwọ ụgbọala dị na sistemụ arụmọrụ Windows, ọ bụ ezie na ha na-enye gị ohere iji kọmputa, ghaghị ịchọta ndị mbụ: maka kaadị vidiyo, site na ATI, Nvidia ma ọ bụ onye ọzọ na-emepụta ihe, maka eriri na-enweghị ike - dịka ihe. Ya mere, maka ngwaọrụ niile mgbe mbụ ị wụnye. Mgbe ahụ, ịnọgide na-enwe nsụgharị ọhụrụ nke ndị ọkwọ ụgbọala a abụghị ọrụ kachasị mma: iche echiche maka imelite bụ, dị ka e kwuworo, naanị na nsogbu ụfọdụ nwere.
Ị zụtara laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa na ụlọ ahịa ahụ
Ọ bụrụ na ịzụrụ kọmputa ma nwebebeghị ihe ọ bụla n'ime ya kemgbe ahụ, o yikarịrị ka ndị ọkwọ ụgbọala niile dị mkpa maka ngwaọrụ netwọk, kaadị vidiyo na ngwaọrụ ndị ọzọ abanyela na ya. Ọzọkwa, ọ bụrụgodị na ị rụgharịa Windows, ọ bụrụ na ị na-eji resetting laptọọpụ gị ma ọ bụ kọmputa na ntọala ụlọ ọrụ ahụ, ọ gaghị etinye ndị ọkwọ ụgbọala Windows, mana ndị na-adabara ngwaike gị. Ya mere, ọ bụrụ na ihe niile na-arụ ọrụ, ọ dịghị mkpa ka ịwelite ndị ọkwọ ụgbọala.
Ị zụtara kọmputa n'enweghị Windows ma ọ bụ mee ka echichi dị ọcha nke OS
Ọ bụrụ na ịzụrụ kọmputa na-enweghị usoro sistemụ, ma ọ bụ naanị ịtinye Windows n'echebeghị ntọala ochie na mmemme, sistemụ arụmọrụ ga-anwa iji chọpụta ngwaike gị ma wụnye ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala ahụ. Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime ha kwesịrị dochie anya ndị ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ na ndị ọkwọ ụgbọala ndị na-esonụ ga-emelite mbụ:
Kaadị vidiyo - ọdịiche dị na arụ ọrụ nke kaadị vidiyo na ndị ọkwọ ụgbọala na-arụ na Windows yana ndị ọkwọ ụgbọala NVidia ma ọ bụ ATI mbụ dị oke mkpa. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị egwuregwu, jide n'aka na ịwelite ndị ọkwọ ụgbọala ma wụnye ndị ọrụ gọọmentị - nke a ga-azọpụta gị n'ọtụtụ nsogbu na ndịna-emeputa (dịka ọmụmaatụ, ịgagharị na jerks na nchọgharị).
Ndị ọkwọ ụgbọala maka motherboard, a na-atụnyekwa chipset iji wụnye. Nke a ga - enye gị ohere ịnweta ọtụtụ n'ime ọrụ niile nke motherboard - USB 3.0, ụda a na - etinye, netwọk na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere ụda ihe dị iche, netwọk ma ọ bụ kaadị ndị ọzọ, ịkwesịrị ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa na ha.
Dịka e kwuru n'elu, a ga-ebudata ndị ọkwọ ụgbọala site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ndị na-emepụta ngwá ọrụ ma ọ bụ kọmputa (laptọọpụ) n'onwe ya.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ahụ n'anya nke ọma, mgbe ahụ, ịkwapụ site na ntụziaka ndị gara aga, ịnwere ike ịkwado mgbe niile na-emelite ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị vidiyo - nke a nwere ike imetụta arụmọrụ na egwuregwu.